ပါဒီတ (ဂြိုဟ်ရံလ) - ဝီကီပီးဒီးယား
~2,800 km² [မှတ်စု ၁]
~14,000 km³ [မှတ်စု ၁]
~0.18×10၁၇ kg[မှတ်စု ၁]
~0.0047 m/s² [မှတ်စု ၁]
~0.011 km/s[မှတ်စု ၁]
ပါဒီတ သည် ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်၏ အတွင်းပိုင်းကျသော ဂြိုဟ်ရံလတစ်စင်းဖြစ်ပြီး ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ အာကာသယာဉ်မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ဓာတ်ပုံမှတဆင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုထိ ယင်းဂြိုဟ်ရံလမှန်း သတိမပြုမိခဲ့ပေ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဟာဘယ် အာကာသ တယ်လီစကုပ်မှ ပါဒီတကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းအား ယာယီအမည် S/1986 U 10 အဖြစ်ပေးခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ ၁.၇ Karkoschka, Voyager 2001.
↑ IAUC 7171.
Green, Daniel W. E. (May 18, 1999). "S/1986 U 10". IAU Circular 7171. ISSN 0081-0304. Retrieved on 2012-01-26.
Foust၊ Jeff (December 31, 2001)။ Moon of Uranus is demoted။ Spaceflight Now။ 2012-01-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"The Second Ring-Moon System of Uranus: Discovery and Dynamics" (2006-02-17). Science 311 (5763): 973–977. doi:10.1126/science.1122882. PMID 16373533. Bibcode: 2006Sci...311..973S.
Green, Daniel W. E. (September 3, 2003). "Satellites of Uranus". IAU Circular 8194. ISSN 0081-0304. Retrieved on 2012-01-26.
USGS/IAU (July 21, 2006)။ Planet and Satellite Names and Discoverers။ Gazetteer of Planetary Nomenclature။ USGS Astrogeology။ 2012-01-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Perdita Profile Archived 8 August 2007 at the Wayback Machine. by NASA's Solar System Exploration
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပါဒီတ_(ဂြိုဟ်ရံလ)&oldid=661136" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၀:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။